နီကိုးလ် Prause ၏မဖွယ်မရာသတင်းပေးပို့ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အားမဖွယ်မရာအသုံးပြုခြင်းခံရသူများစွာ - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ဖြစ်သည်
နီကိုးလ် Prause ၏မလိုတမာသတင်းပို့ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အားမဖွယ်မရာအသုံးပြုခြင်းခံရသူများစွာ
နီကိုးလ် Prause (၁) အခြေအမြစ်မရှိသော၊ မလိုတမာတိုင်ကြားချက်များနှင့်တရားစွဲဆိုမှုများကို (၂) ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ (သို့) သူမတင်ပြခြင်းမရှိလျှင်သူမတင်သွင်းသည်ဟုလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြသခြင်းသည်တသမတ်တည်းကျသောစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုပုံစံကိုပြသခဲ့သည်။ (Prause ရဲ့အပြုအမူများကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသောစာမျက်နှာ ၄ ​​မျက်နှာ - စာမျက်နှာ 1, စာမျက်နှာ 2, စာမျက်နှာ 3, စာမျက်နှာ 4.)
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမကျေနပ်ချက်များနှင့်မှားယွင်းသောတောင်းဆိုမှုများ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစာရင်းဖြစ်သည်။ (လက်စားချေခံရမည်ကိုကြောက်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်နောက်ထပ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကိုချန်လှပ်ထားရန်တောင်းဆိုခံရသည်။ ) ထို့အပြင်၊ Prause သည်သူမ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုရေဒါအောက်တွင်ဆက်လက်ထားရှိရန် "သတင်းပေးသူအဆင့်အတန်း" ကိုပုံမှန်ပြောဆိုသည်။ ထို့ကြောင့်ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည့်အပြင်အများပြည်သူနှင့်မသက်ဆိုင်သောတိုင်ကြားမှုများလည်းရှိနိုင်သည်။
Prause ၏အခြေအမြစ်မရှိသောအုပ်ချုပ်ရေးတိုင်ကြားချက်များကိုယေဘုယျအားဖြင့်အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းအဖြစ်ပယ်ချခဲ့သည်။ သို့သော်အနည်းငယ်သောသူများသည်အချိန်ကုန်ဆုံးသောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်ထုတ်ပယ်ခံရခြင်းသို့မဟုတ်ထိရောက်သောရလဒ်များရရှိရန်အနည်းငယ်သာထုတ်လုပ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
Staci အညှောက် LICSW - (Staci Sprout မှဤစာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ။ လိင်စွဲလမ်းမှုပြန်လည်ထူထောင်ရေးလှုပ်ရှားသူတ ဦး အနေဖြင့်မမျှော်လင့်သောရင်းမြစ်များမှအနိုင်ကျင့်ခြင်း၊)
၀ ါရှင်တန်ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဌာနသို့သတင်းပို့သည်။ နှစ်ကြိမ်။ (အရေးယူမှုမရှိ)
၂၀၂၀ တွင် Prause သည် Staci Sprout အားတရားစွဲဆိုထားခြင်းမရှိသောသေးငယ်သည့်တောင်းဆိုမှုများကိုကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်တင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာမလျော်ကန်သောနေရာများအတွက် 2020 ခုနှစ်တွင်ပယ်ချခံခဲ့ရသည်
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် Prause သည် ၀ ါရှင်တန်ရှိ Staci Sprout ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ စောင့်နေပါတယ်
Staci Sprout ၏ကျမ်းကျိန်လွှာကို PDF သည် Rhodes v Prause တွင်တင်ခဲ့သည် ဖြစ်ရပ်များကိုရေတွက်။
သစ်မူးယစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် - ယူတာပြည်နယ်ရှိကလေးနှင့်မိသားစု ၀ န်ဆောင်မှုဌာနသို့ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပုံပြင်များဝေမျှခြင်းသည်အရွယ်မရောက်သေးသူများအားအလွဲသုံးစားမှုဖြစ်သည်ဟူသောသီအိုရီနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းပို့ခဲ့သည်။ DCFS သည်အရေးယူခြင်းမရှိပါ။
ဒီဇင်ဘာလ 2016: Prause (FTND အကြောင်းကို 100 ကြိမ်ကျော် tweets) Utah ၏ပြည်နယ်မှသစ်မူးယစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်
Fight of the New မူးယစ်ဆေးဝါးမှတဆင့် Dr.Prause အားမုဒိမ်းကျင့်သင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Rory Reid ပါရဂူဘွဲ့ - UCLA မှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်း။ UCLA သို့ (နှင့်ဖြစ်ကောင်းကာလီဖိုးနီးယားစိတ်ပညာဘုတ်အဖွဲ့သို့) အစီရင်ခံတင်ပြခံရသည်။ UCLA သည်သူမအပေါ်စာချုပ်သက်တမ်းတိုးရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့်အတူတစ်ပြိုင်နက်တည်းစတင်ခဲ့ပြီးသူမသည်ပညာရေးဆိုင်ရာအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
လက်ရှိ Prause ၏ AmazonAWS ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်စာရွက်စာတမ်းငါးခုအားစာဖတ်သူများအား Rory Reid အားကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်သို့တင်ပြရန်တိုက်တွန်းထားသည် - စာမျက်နှာ ၁၊ စာမျက်နှာ ၂၊ စာမျက်နှာ ၃၊ စာမျက်နှာ ၄၊ စာမျက်နှာ ၅ ။ (Update - Prause သည်ဤစာမျက်နှာကိုထုတ်ဝေပြီးနောက် Rory Reid စာမျက်နှာ ၅ ခုကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သည်) မျက်နှာပြင်များကိုဤအပိုင်း ၂ တွင်ထိန်းသိမ်းထားသည်။
ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၁၄၊ Prause သည် (porn-recovery forum တွင်) UCLA လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Rory Reid, PhD ကိုတိုက်ခိုက်ရန်နှင့်ရှုတ်ချရန် alias ကိုအသုံးပြုသည်။
၂၀၁၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၆ UCLA လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်း Rory C. Reid PhD ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်အပြစ်တင်ခြင်း။ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်က“ TellTheTruth” သည်အလားတူတောင်းဆိုမှုများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကို Prause ၏ခြေအိတ်ရုပ်သေးများကမကြာခဏပြုလုပ်သော porn recovery site ပေါ်တွင်တင်ခဲ့သည်။
Linda Hatch ပါရဂူဘွဲ့ - (၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ လင်ဒါဟက်ချ်၊ ပါရဂူဘွဲ့မှတ်တမ်း - နီကိုးလ် Prause & Liberos LLC အား Donald Hilton အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခြင်း။)
CA Psych Board သို့အကြောင်းကြားခဲ့သည် (အရေးယူမှုမရှိပါ)
APA သို့အကြောင်းကြားခဲ့သည် (အရေးယူမှုမရှိ)
Prause က Hatch အားခိုင်မာသောအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာတစ်စောင်ကိုလည်းပေးပို့ခဲ့သည်။ “ အဆက်အသွယ်မရှိ” အတုအယောင်တောင်းဆိုမှုများနှင့်အတုအယောင်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာများ (Linda Hatch၊ Rob Weiss, Gabe Deem, Gary Wilson, Marnia Robinson, Alex Rhodes) စသည့်လူများအားနှုတ်ပိတ်နေသည်ဟုချီးမွမ်းပါ။
Bradley Green PhD - (ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ Bradley Green၊ PhD ကျမ်းကျိန်လွှာ - နီကိုးလ် Prause & Liberos LLC ကို Donald Hilton အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခြင်း။)
သူ၏စာတမ်းတစ်စောင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သောဂျာနယ်သို့သတင်းပို့သည် (လိင်စွဲ & compulsivity) ။ ဂျာနယ်ထုတ်ဝေသူသည်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်နောက်ထပ်အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါ။
ဂျေဆန်ကာရိုးပါရဂူဘွဲ့ - Prause သည်သုတေသနရလဒ်များကိုမကြိုက်သည့်အတွက် Brigham Young တက္ကသိုလ်သို့တင်ပြခဲ့သည် (အရေးယူမှုမရှိပါ)
Geoff Goodman ပါရဂူဘွဲ့ - Longland တက္ကသိုလ်သို့“ အနှောင့်အယှက်ပေးမှု” အတွက်အစီရင်ခံခဲ့သည် (အရေးယူမှုမရှိပါ)
Geoff Goodman, PhD ကျမ်းကျိန်လွှာ: Rhodes v Prause
စကော့တလန်ကုသိုလ်ဖြစ်စည်းမျဉ်းဥပဒေအားကျူးလွန်ခဲ့သောအပြုအမူများအတွက်အစီရင်ခံခြင်း (အရေးယူခြင်းမရှိ) - 2015 & 2016: Prause သည် COPE ၏ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းကိုဖောက်ဖျက်ပြီးဂယ်ရီ Wilson နှင့်စကော့တလန်မှလှူဒါန်းမှုကိုနှောက်ယှက်သည်
လှူဒါန်းမှုတည်ရှိရာစုပေါင်းအဖွဲ့သို့သတင်းပို့ခြင်း (The Melting Pot) - “ Janey Wilson” (Prause alias) ၏အသုံးချမှု (အရေးယူမှုမရှိပါ)
ဇူလိုင်လ, 2018: အီးမေးလ်များခုနှစ်, ICD-11 မှတ်ချက်အပိုင်း၌၎င်း, ဝီကီပီးဒီးယား, Prause နှင့်သူမ၏ sockpuppets အပေါ်မဟုတ်မမှန် Wilson ကအဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ 9,000 ပေါင်ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းဆိုကြသည် (ငြင်းဆိုခဲ့သည်လူသိရှင်ကြား)
အလက်ဇန်းဒါး Rhodes Nofap ၏
Prause က Rhodes ကို FB သို့အစီရင်ခံသည်ဟုလူသိရှင်ကြားပြောဆိုခဲ့သည်I. FOIA တောင်းဆိုချက် FBI ကထိုကဲ့သို့သောအစီရင်ခံစာရှိခဲ့ပြသထားတယ်.
Alex Rhodes အားတားမြစ်ရန်အမိန့်ရှိသည်ဟုရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး အား Prause ကမှားယွင်းစွာပြောဆိုခဲ့သည်။ Rhodes သည် Nicole Prause / Liberos LLC အားအသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုသည်။
Prause က Rhodes ကို Pennsylvania ပြည်နယ်စိတ်ပညာဘုတ်အဖွဲ့သို့လိုင်စင်မရှိဘဲကျင့်သုံးခြင်းအတွက်သတင်းပို့ခဲ့သည်။ CNN ကအခြားလူငယ်များနှင့်အုပ်စုတွင်သူနှင့်အတူ porn ၏ဆိုးကျိုးများအကြောင်းပြောဆိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဘယ်သူမျှမကုထုံးကမ်းလှမ်းခဲ့သည်သို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ (တိုးတက်မှုအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး) ။ RealYBOP တွစ်တာ psych ဘုတ်အဖွဲ့မှ Rhodes အစီရင်ခံရန်နောက်လိုက်တောင်းဆိုနေတာ။ ကြည့်ပါ ၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီ / မတ်လ၊ Prause သည်အဲလက်စ်ရော့ဒ်အား Pennsylvania ပြည်နယ်စိတ်ပညာဘုတ်အဖွဲ့သို့လိုင်စင်မရှိဘဲကျင့်သုံးခြင်းအတွက်သတင်းပို့ခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် CNN ကအခြားလူငယ်များနှင့်အုပ်စုတွင်သူ့ကိုရိုက်ကူးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။.
Prause သည် Rhodes ကို Pennsylvania ပြည်နယ်ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်ကုသိုလ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းများသို့တင်ပြခဲ့သည် ရန်ပုံငွေရှာအားထုတ်မှု.
အဲလက်စ်ရော့ဒ်စ်၏ရန်ပုံငွေရှာခြင်းကိုလက်ခံသည့်အတွက်အလှူရှင် Box မှ Prause မှတင်ပြခဲ့သည်မှာထင်ရှားသည်။ ဇန်နဝါရီ - မတ်လ၊ ၂၀၂၀ - အဲလက်စ်ရော့ဒ်စ်၏ "Donor Box" ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုကိုဖယ်ရှားရန်ကြိုးပမ်းမှုတွင် Prause သည်အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာဗြိတိန်ဆောင်းပါးကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။
ဂါယူဆပါသည်၏တည်ထောင်သူ RebootNation - ချီးမွမ်းခြင်း (မဟုတ်မမှန်) မှအစီရင်ခံခဲ့သည် အချိန် Gabe Deem မဂ္ဂဇင်းကသူမရဲ့လေ့လာမှု (အယ်ဒီတာထံစာရေးသည်) ကိုတရားဝင်ဝေဖန်မှုတစ်ခုရေးဖို့ဆရာဝန်တစ် ဦး ကိုအယောင်ဆောင်ကာ (စာကို Gabe ရဲ့ကွန်ပြူတာထဲထည့်လိုက်သည်။ )) ။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် Prause သည် Deem အားတောင်းဆိုမှုများအတွက်တရား ၀ င်ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။
Pabe နှင့်သူမ alias (@BrainOnPorn) ၏အဖြစ်အပျက်များစွာက Gabe Deem ကိုအသရေဖျက်ခြင်းနှင့်နှောင့်ယှက်ခြင်း:
မတ်လ, 2015 (ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော): ( "PornHelps" အပါအဝင်) Prause နှင့်သူမ၏ SOCKS ရုပ်သေးဂါယူဆပါသည်လိုက်
၂၀၁၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈ - Ley & Prause သည် Gary Wilson၊ Alexander Rhodes နှင့် Gabe Deem တို့အားအဖြူ supremacists / ဖက်ဆစ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ရည်ရွယ်သည့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးဆွဲခဲ့သည် (Prause သည်မှတ်ချက်များအပိုင်းတွင် Rhodes & Nofap ကိုတိုက်ခိုက်သည်)
၂၀၁၁ အောက်တိုဘာ၊ RealYBOP twitter (Prause & Daniel Burgess) သည် Alex Rhodes & Gabe Deem အားနှစ်ဖက်စလုံးမှ realyourbrainonporn.com အားဖြုတ်ချရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်ဟုမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲခဲ့သည်
ထွက်မြောက်ရာအသံ - (ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ လိုင်လာဟတ်ဒတ်ကျမ်းကျိန်လွှာ - နီကိုးလ် Prause & Liberos LLC ကို Donald Hilton အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခြင်း။
Exodus Cry သည် 501c3 အတွက်လိမ်လည်လှည့်စားမှုဆိုင်ရာကြေငြာချက်ရရှိခဲ့သည့်အတွက်မစ်ဆူရီရှေ့နေချုပ်ထံသို့ Exodus Cry သတင်းပို့ခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ 2019: Prause မဟုတ်မမှန်လိမ်လည်မှုထှကျမွောကျရာ Cry စွပ်စွဲပါတယ်။ CEO ဖြစ်သူရဲ့ဝီကီပီးဒီးယားစာမျက်နှာကိုတည်းဖြတ်ရန်တွေ့မြင်, (spurious အကြောင်းပြချက်များအတွက်) သည်မစ်ဆူရီရှေ့နေချုပ်မှ non-အမြတ်အစီရင်ခံရန် Twitter ကိုနောက်လိုက်မေးတယ် (အရေးယူမှုမရှိပါ)
Rhodes v Prause အတွက် Laila Mickelwait / Exodus Cry ကျမ်းကျိန်လွှာ။
ယောဟနျသ Adler MD - Prause ကပါမောက္ခအက်ဒလာကိုစတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်သို့“ နှောင့်ယှက်မှု” အတွက်အစီရင်ခံခဲ့သည် (အရေးယူမှုမရှိပါ)
နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၁၅ Cureus ဂျာနယ်တည်ထောင်သူ John Adler MD ဘလော့ဂ်များသည် Prause နှင့် David Ley တို့၏အနှောင့်အယှက်ပေးမှုအကြောင်းပါရှိသည်
ယောဟနျသ Adler, MD ကျမ်းကျိန်လွှာ: Rhodes v Prause
CUREUS သတင်းစာ - Prause သည်ဂျာနယ်ကို PubMed Central သို့တင်ပြခဲ့သည်၊ ၎င်းကိုစာရင်းမှဖယ်ထုတ်ပြီးအရှက်ခွဲရန်ကြိုးစားသည် (အရေးယူမှုမရှိပါ)
ပြီလ ၁၁ ရက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်။ ။ ချီးမွမ်းခြင်းသည်ဆေးဂျာနယ်အားမှားယွင်းစွာဖော်ပြသည် Cureus လိမ်လည်မှုများတွင်ပါဝင်နေသည်နှင့် (ယောဟန် Adler ၏အယ်ဒီတာမတော်မတရားဖြစ်ပါသည် Cureus)
ဒွန်ဟီလ်တန်, MD သူသည် neurosurgery ကျောင်းသားများ၊ တက္ကဆက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဘုတ်အဖွဲ့နှင့်ပညာသင်ဆုဂျာနယ်များအားသူ၏အထောက်အထားများကိုအတုပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုခိုင်လုံသောစွပ်စွဲချက်များဖြင့်သင်ကြားပို့ချသည့်တက္ကသိုလ်သို့အစီရင်ခံခဲ့သည် (အရေးယူမှုမရှိပါ)
Keren Landman, MD - Prause မေးတယ် Vice များအတွက်ကျွမ်းကျင်သူဒေါက်တာ Landman ရပ်စဲရန်မဂ္ဂဇင်း ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးသား ညစ်ညမ်းသောကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းအားထောက်ခံချက် ၆၀ ကိုထောက်ခံခြင်း။ မယုံနိုင်စရာ။
နိုဝင်ဘာလ 2016: Prause မေးတယ် Vice ကျားကန် 60 (porn အတွက်ကွန်ဒုံး) ထောက်ပံ့ဘို့ကူးစက်ရောဂါအထူးကု Keren Landman, MD မီးမဂ္ဂဇင်း.
ဒီပုံပြင်အတွက်အများကြီးပို: 2015 အတွက်အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း Prause အကူအညီများကမ်းလှမ်း: သူမလက်ခံနှင့်ချက်ချင်းကျားကန် 60 (porn အတွက်ကွန်ဒုံး) တိုက်ခိုက်.
ပူးတွဲရေးသားသူဆရာဝန် ၇ ဦး အနက်အများစုသည် ပန်းခြံ et al ။ , 2016 - Prause သည်သူတို့၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဘုတ်အဖွဲ့သို့စာရွက်ပေါ်တွင်ရောက်ရှိနေခြင်းကြောင့်အစီရင်ခံခဲ့သည် (သူမ၏အမြင်နှင့်သဘောမတူသောစာတမ်းနှင့်ပတ်သက်သော Prause ၏မမုန်းတီးသောမကောင်းမှုများအကြောင်း) ရှိသည်ဖို့ Prause ရဲ့ (ပျက်ကွက်) အားထုတ်မှု အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်း (ပန်းခြံ et al။ , 2016) ပြန်ရုပ်သိမ်း) (အရေးယူမှုမရှိ)
ပူးတွဲရေးသားသူဂယ်ရီ Wilson ကြောင်းစက္ကူအတူတူပင်
နောက်ခံ - အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းရရှိရန် Prause ၏မအောင်မြင်သောကြိုးပမ်းမှုများပန်းခြံ et al။ , 2016) ပြန်ရုပ်သိမ်း
ချီးမွမ်းပြောဆိုသည် လူသိရှင်ကြားနှင့်အကြိမ်ကြိမ် Wilson အား FBI သို့နှစ်ကြိမ်တိုင်အစီရင်ခံခြင်းFOIA ၏တောင်းဆိုချက်အရ FBI တွင်ထိုကဲ့သို့သောအစီရင်ခံစာမရှိပါ)
Oregon စိတ်ပညာဘုတ်အဖွဲ့သို့သတင်းပို့သည် လိုင်စင်မရှိဘဲစိတ်ပညာကိုကျင့်သုံးခြင်းအတွက်အမည်မဖော်လိုသောပါတီတစ်ခုကပြောကြားသည်။ (ထပ်မံအရေးယူခြင်းမရှိပဲထုတ်ပယ်ခြင်း)
လူသိရှင်ကြား Wilson ကဖြစ်ခဲ့သည် ရဲကိုအစီရင်ခံခဲ့သည် (LAPD နှင့် UCLA PD) ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှစ၍ (နှစ်ပေါင်းများစွာထိုကဲ့သို့သောအစီရင်ခံစာများမရှိခဲ့ပါ။ နောက်ဆုံးတွင် Prause သည် LAPD အစီရင်ခံစာကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်တင်ခဲ့သည်။ Wilson ကပင်အသိပေးခြင်းမရှိခဲ့ပါ ... Prause သည်ယုံလွယ်သောကျောင်းသတင်းစာအယ်ဒီတာကို 2013 ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေရန်ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ်အရာရှိများဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ] ကြည့်ပါ မတ်လ 17, 2019: Wisconsin ပြည်နယ်-ဟော်ကျောင်းသားသတင်းစာ (The ဘောလုံးရိုက်) ပို့စ်များကိုနီကိုးလ် Prause အားဖြင့်မှားယွင်းသောရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာတက္ကသိုလ်ကအပိုဒ်။) (LAPD မှအရေးယူခြင်းမရှိပါ)
(ကြည့်ရသည်မှာ) Wilson အား ISSM (လိင်ဆိုင်ရာဆေးပညာဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း) သို့အစီရင်ခံတင်ပြ ကောင်းကင်သည်ဘာကိုသိသနည်း၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲလစ္စဘွန်းတွင်မတ်လ၊ ၂၀၁၈ တွင်ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားသောသူ၏အဓိကမိန့်ခွန်းကိုပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် Prause သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုစတင်ခဲ့ပြီးတစ်စုံတစ် ဦး အား“ ကွန်ဖရင့်တစ်ခုမှအမှန်တကယ်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်ဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်” ဟုပြောကြားခဲ့ပြီးဂယ်ရီကသူ၏အထောက်အထားများကိုလွဲမှားစွာဖော်ပြခဲ့သည် (ထပ်မံ)သူမရှိခဲ့) ။ ဂယ်ရီမကြာမီသည်သူ၏ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည် အော်ရီဂွန်စိတ်ပညာဘုတ်အဖွဲ့ exoneration ISSM ကိုသူအားဖျက်သိမ်းရန်စည်းရုံးရန်အတွက်သူသည်သူမအားလိုင်စင်မရှိဘဲစိတ်ပညာကိုလိုင်စင်မရှိဘဲကျင့်သုံးခြင်းအတွက်သတင်းပို့ခဲ့သည်ဟုအစောပိုင်းက ISSM သို့ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
Gary's site ကိုသတင်းပို့သည် yourbrainonporn.com အသုံးပြုမှုမူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုများအတွက်3ကြိမ် အခြေအမြစ်မရှိ DMCA ယူ -down တောင်းဆိုမှုများ သူ၏ site မှသူမ၏အသရေဖျက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်၏စာရွက်စာတမ်းများကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကြိုးစားမှုအတွက်။ (အရေးယူမှုမရှိပါ)
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်။ ။ အခြေခိုင်သော DMCA စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများသည် Prause ၏အသရေဖျက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်မှုသက်သေအထောက်အထားများကိုဖယ်ရှားရန်ပျက်ကွက်သောအခါသူမသည် ဂယ်ရီ Wilson ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သည့် Linode သို့အက္ခရာ တင်၍ ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ဖျက်ခြင်း။ (အရေးယူမှုမရှိပါ)
2019 နိုဝင်ဘာလတွင် Prause သည်ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ“ Safe At Home” အစီအစဉ်အရကာကွယ်မှုအတွက်အောင်မြင်စွာလျှောက်ထားခဲ့ပြီး Wilson ကသူမကိုခြိမ်းခြောက်ပြီးသူ၏အိမ်လိပ်စာကိုသူ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်တင်ခဲ့သည်ဟုမဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲခဲ့သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နို ၀ င်ဘာလ - Prause သည်ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ“ Safe At Home Program” ကိုမှားယွင်းသောဟန်ဆောင်မှုဖြင့် ၀ င်ရောက်ပြီးသူမ၏သားကောင်များနှင့်ဝေဖန်သူများအားအနှောင့်အယှက်ပေးသည်။။ Prause သည်သူမ၏အဆင့်အတန်းကိုသူတစ်ပါးအားခြိမ်းခြောက်ရန်သုံးခဲ့သည်။ သူမနှင့်ဝေဖန်သူများနှင့်ဂယ်ရီ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ရှင် Linode ကို Safe At Home လုပ်ရပ်အားချိုးဖောက်သည်ဟုအကြောင်းမဲ့စွပ်စွဲခဲ့သည်
၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီ - Prause ၏အကုသိုလ် Cease & Desist စာမအောင်မြင်သောအခါ (Prause ၏အိမ်လိပ်စာသည် YBOP တွင်ရှိသည်ဟုမှားယွင်းစွာဖော်ပြထားသည်) သူမ YBOP ကို ​​web host Linode အားဒုတိယအကြိမ် Cease & Desist အက္ခရာဖြင့်ခြိမ်းခြောက်။ ထပ်မံကြိုးစားသည်။ Wilson ၏ site တွင်သူမ၏အိမ်လိပ်စာမရှိသောကြောင့်၎င်းလည်းမအောင်မြင်ပါ။ (အရေးယူမှုမရှိပါ)
၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီ၊ အထက်ပါ C&D ပျက်ကွက်သောအခါ၊ Prause က Wilson ၏ဒေသခံ Ashland ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုခေါ်သည်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၏မှားယွင်းသောအစီရင်ခံစာကိုတင်ပြရန်ကြိုးစားခြင်း၊ သူမ၏အိမ်လိပ်စာသည် YBOP တွင်ရှိသည်ဟုဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ အရာရှိဂျေဆန်စိန့်ဂျွန်က Prause ၏စွပ်စွဲချက်သည်ရာဇ ၀ တ်မှုနှင့်မသက်ဆိုင်ကြောင်း၊
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်တွင်ဖြစ်စေ၊ ယာယီထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းရှာ၏ သေနတ်ကိုင်ထားသောလူများ (အတော်လေးသိသာထင်ရှားသည် Wilson မဟုတ်) ၏ရုပ်ပုံများကို အခြေခံ၍ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအား Wilson ၏ဆန့်ကျင်မှု တရားသူကြီးက TRO ကိုငြင်းဆိုပေမယ့် ၂၀၂၀၊ မတ်လ ၆ ရက်နေ့မှာအမြဲတမ်းတားမြစ်မိန့်ကိုကြားနာခွင့်ပြုတယ်။ ချီးမွမ်းခြင်းဟာ Wilson ကိုအစေခံခြင်းမပြုခဲ့ပေမယ့် Wilson ရဲ့အကြံပေးချက်ကသူမလိုပဲပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီး ၀ န်ဆောင်မှုကိုငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ တရားသူကြီးကဒီကိစ္စကို ၂၀၂၀၊ မတ်လ ၂၅ ရက်အထိဆက်ပြောသည်။ Wilson သည်တရားမ ၀ င်စနစ် (TRO) အားအလွဲသုံးစားလုပ်မှုအားဆန့်ကျင်။ Prause အားဆန့်ကျင်သော SLAPP အဆိုကိုတင်သွင်းခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင်လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်ကောင်တီအထက်တရားရုံးကသူအားတားမြစ်မိန့်ကိုရယူရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်ဟုစီရင်ချက်ချခဲ့သည် (အများပြည်သူပါဝင်မှုကိုဆန့်ကျင်။ မဟာဗျူဟာမြောက်တရားစွဲဆိုမှု) (အများအားဖြင့်“ SLAPP ဝတ်စုံ”) ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။။ အနှစ်သာရအားဖြင့်တရားရုံးက Prause သည် Wilson အားတိတ်ဆိတ်စွာအနိုင်ကျင့်ရန်နှင့်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိရန်အမိန့်ပေးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်အားအလွဲသုံးစားပြုသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် ဥပဒေအရ SLAPP ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် Prause က Wilson ၏ရှေ့နေကိုပေးဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀ တွင် Prause သည် OR ၌ Wilson အားတရားစွဲဆိုမှုအားတရားစွဲဆိုမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအသရေဖျက်မှုနှင့်စာချုပ် ၀ င်ရောက်မှုကိုစွပ်စွဲခဲ့သည်။ ဖြစ်ရပ်မှန်အမှတ် 2020SC20 ။ 25610 ဇန်နဝါရီလ 22 ရက်နေ့တွင်ကြားနာမှာ အော်ရီဂွန်တရားရုံးကကျွန်ုပ်၏မျက်နှာသာပေးမှုကိုစီရင်ပြီး Prause အားကုန်ကျစရိတ်များနှင့်ထပ်မံပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်.
၂၀၂၁၊ ဇန်နဝါရီလတွင် Prause က Wilson အားနောက်ထပ်မှားယွင်းသောအရာများဖြင့်စွပ်စွဲထားသောနောက်ထပ်တောင်းဆိုစာကိုပို့ခဲ့သည်။
MDPI - ဝေဖန်မှုကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်ဂျာနယ်၏ပင်မကုမ္ပဏီသည်ရေတပ်သမားများနှင့်ပူးတွဲရေးသားခဲ့သည်။ အပြုအမူသိပ္ပံပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူရှိသည်ဖို့ Prause ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု (ပန်းခြံ et al။ , 2016) ပြန်ရုပ်သိမ်း).
Prause သည်ဂျာနယ်ကို COPE သို့တင်ပြခဲ့သည် (ဂျာနယ်ကျင့် ၀ တ်ဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့) (အပေါ်ယံတုံ့ပြန်မှု၊ စာရွက်ကိုမူပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းမရှိသေးပါ။ )
နှင့် PubMed Central မှ (အရေးယူမှုမရှိ)
FTC သို့ (အရေးယူမှုမရှိ)
မှတ်ချက် - ၂၀၁၉၉ မှာ MDPI ကနီကိုးလ်ရဲ့မကောင်းတဲ့အပြုအမူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်နှစ်ခုကိုတင်ခဲ့သည် (ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ရပ်များသည်ယခင်ကမရှိခဲ့ပါ)
ဇွန်လ, 2019: MDPI ဂျာနယ်တွင်၏ (မိဘကုမ္ပဏီ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ) သူမ၏မအောင်မြင်သောကြိုးပမ်းမှုများနှင့်ပတ်သတ်သောနီကိုးလ်ပရာယပ်စ်၏ကိုယ်ကျင့်တရားကင်းမဲ့သည့်အပြုအမူဆိုင်ရာအယ်ဒီတာ့အာဘော်ကိုထုတ်ဝေသည် ပန်းခြံ et al။ , 2016 ပြန်ရုပ်သိမ်း။
၂၀၁၀ ဇွန်၊ ဇွန်လ - MDPI ၏ဝီကီပီးဒီးယားစာမျက်နှာကိုတရားဝင်တုံ့ပြန်မှု (၎င်းကိုနီကိုးလ် Prause sockpuppets တည်းဖြတ်သည်)
DJ Burr - Prause သည်ကုထုံးဆရာ Burr အား ၀ ါရှင်တန်ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဌာနသို့တင်ပြခဲ့သည်။ (အရေးယူမှုမရှိပါ)
၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ပြီလ၊ raပြီလတွင်ဝါရင့်ဆရာဝန် DJ Burr အားခြိမ်းခြောက်ရန်နှင့်ခြိမ်းခြောက်ရန်အတွက်ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဌာနသို့သူ့ကိုမကောင်းဆိုးဝါးသတင်းပို့သည်။
Prause သည်လူမှုရေးမီဒီယာများမှတဆင့်၊ ပြည်သူလူထုအားပညာရှင်များနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့အစည်းများအားစိတ်ပညာဘုတ်အဖွဲ့၊ FTC နှင့်ရှေ့နေချုပ်ထံသို့အစီရင်ခံရန်ထပ်ခါတလဲလဲတိုက်တွန်းခဲ့သည်။ စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ Prause စာမျက်နှာ၏ကဏ္:များ:
၂၀၁၅ နှင့် ၂၀၁၆ - လိင်စွဲလမ်းမှုကိုကုသသည့်ကုထုံးကိုလိင်စွဲလမ်းသူအားမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲခဲ့သည်
ဇန်နဝါရီလ 29, 2018: Prause အဆိုပါ ICD-11 အတွက်လာမည့် "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ" ရောဂါ အသုံးပြု. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစွဲရောဂါမညျ့သူကုသခြိမ်းခြောက်
Diana Davison - ချီးမွမ်းခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည် ဂျာနယ်လစ် Diana Davison နှင့် The Post Millennial သူတို့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောကြောင့်ဥပဒေရေးရာအရေးယူခြင်းကိုခြိမ်းခြောက်သည့်စာလုံးပေါင်းအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ်အားဖြင့်ရပ်တန့်ပါ Prause မှချော့မော့မဟုတ်ခဲ့တစ် ဦး လိုက်ဖို့ဖော်ထုတ် ''။ (အရေးယူမှုမရှိပါ)
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နို ၀ င်ဘာလ၊ Diana Davison ၏ Millennial Post ကိုဖွင့်ပြရာတွင်“ Prause သည် Davison ကိုအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း / ရှုတ်ချခြင်းခံရသည်။
Jonathon ဗန်မာရင် - ငါ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှု တရားဝင်အောင်ပွဲများ Nicole Prause မှ LifeSite News မှအောက်ပါအင်တာဗျူးကိုထုတ်ဝေခဲ့သည် - ညစ်ညမ်းသောလူသတ်သမားသည်တရားရုံးကိုပိတ်ပစ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သော 'porn prof' ကိုတရားဝင်အောင်ပွဲခံခဲ့သည်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ ဂယ်ရီ Wilson သည်နီကိုလိုင်ပရက်စ်ကတရားစွဲဆိုခဲ့သည်၊ သူသည်အဆက်မပြတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအားမည်သို့အန္တရာယ်ရှိသည်ဟူသောစွပ်စွဲချက်ဖြင့်သူ့ကိုလှောင်ပြောင်ခဲ့သည်။ သူနိုင်ခဲ့တယ်။ အတူဖြစ်ပွားခဲ့သည်အဖြစ် Diana Davison's အနှစ်တစ်ထောင် Post ဖော်ထုတ် ', Prause နှင့်သူမ၏ alias ကိုအကောင့် (@BrainOnPornရေးသားသူကိုနှောင့်ယှက်သည်၊ ဆောင်းပါးပြောဆိုရာကိုလိမ်။ တရားစွဲဆိုမှုကိုခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ ကြည့်ပါ
၂၀၂၀၊ သြဂုတ်လ - LifeSite News မှဂယ်ရီ Wilson အားလူတွေ့မေးမြန်းခြင်းကိုထုတ်ပြန်သည် ချီးမွမ်းခြင်းသည်စာရေးသူအားနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေပျက်ခြင်း၊
အာရုန်သည် Minc JD ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ဇူလိုင်လတွင်၊ Prause ကသူမကိုတွစ်တာနောက်လိုက်များအားသူမ၏အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတွစ်တာများကိုပြန်လည်ထုတ်ဝေရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ Minc သည်သူမအားနှစ်အတန်ကြာသတ်ပစ်မည်ဟုခြိမ်းခြောက်သောလူများထံပေးပို့ခဲ့သည်။ Minc က Twitter ကိုလူသိရှင်ကြားငြင်းပယ်ခဲ့ပေမဲ့၊ Prause ရဲ့လိမ်လည်လှည့်ဖျားခံသူတစ် ဦး ကမက်ကင်တန်ပြည်နယ်တရားသူကြီးများအသင်း၊ Cleveland Metropolitan Bar Association နဲ့အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်တရားရုံးချုပ်ရဲ့တွစ်တာအကောင့်များနှင့်တိုက်ရိုက်သတင်းပို့ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုများကိုတွစ်တာကိုမျှဝေပြောဆိုခဲ့တယ်၊ ချိုးဖောက်မှု။ ထပ်ဆင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်လိမ်လည်လှည့်ဖျားသူသည်အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်တရားရုံးချုပ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှယူခဲ့သောအိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစည်းကမ်း ၄.၄ ၏မျက်နှာပြင်ပုံကိုပူးတွဲဖော်ပြခဲ့သည်။ တွဲဖက်တရားခံအဖြစ်ချီးမွမ်းခြင်းကိုနောက်ပိုင်းတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ကြည့်ပါ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ပြီလ - Melissa Farmer သည် Prause ၏လိမ်လည်မှုများကိုဖြန့်ဝေပြီးဈေးကြီးသောတရားစွဲဆိုမှုအားဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည်.
ရေဗက္ကာ Watson (skepchick) - ၂၀၂၁ ခုနှစ်Aprilပြီလ။ ။ Watson ဗီဒီယိုတွင် Prause ၏တရားရေးရာကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ၂ မိနစ်အပ်ဒိတ်လုပ်ခြင်းကြောင့် Wra သည် YouTube နှင့် Patreon တို့အား ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များကိုချိုးဖောက်ခြင်းဖြင့်မှားယွင်းစွာအစီရင်ခံခဲ့သည်။ YouTube ကဗွီဒီယိုကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ Watson သည်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသော ၁၈ မိနစ်ကြာဗီဒီယိုတစ်ခုကိုတင်ခြင်းအားဖြင့်တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ဤစာမျက်နှာများကိုကြည့်ပါ။
၂၀၂၁ ခုနှစ်Aprilပြီလ - Prause သည် Prause ၏ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးသတင်းကိုတင်ပို့ခြင်းအတွက် Rebecca Watson (“ SkepChick”) ကို YouTube နှင့် Patreon တို့အားသတင်းပို့သည်။ YouTube သည် Watson ကိုမှားယွင်းစွာဆင်ဆာဖြတ်သည်.
မေလ ၇ ရက်၊ ၂၀၂၁ - ရေဗက္ကာ Watson သည် Prause ၏ DMCA ကြိုးပမ်းမှု၊ ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ Prause သည်အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာ tweets ၃၀ ဖြင့်တုံ့ပြန်သည်။ Patreon နှင့်တိုင်ကြားချက်များကိုတင်ပြသည်၊ Watson သည်အကြမ်းဖက်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည်.
နှစ်ပေါင်းများစွာစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာသတင်းပို့မှုများ၊ အတုအယောင်စာများနှင့်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ဥပဒေစိုးမိုးရေး ၀ န်ထမ်းများကိုအလွဲသုံးစားပြုခြင်းများပြုလုပ်ပြီးနောက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် Prause သည်တရားရုံးစနစ် (နှင့်သူမအမျက်ဒေါသ၏ပစ်မှတ်များကို) တရားမဝင်တရားစွဲဆိုမှုများဖြင့်တရားစွဲဆိုခြင်း (တရားစွဲဆိုမှုများကိုဆက်လက်ခြိမ်းခြောက်မှုများ) စတင်ခဲ့သည်။ သူမ၏ဘက်လိုက်မှုသို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုကိုအာရုံစိုက်သူမည်သူမဆိုနှုတ်ပိတ်နိုင်ရန်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသူမသည်တရားမ ၀ င်သောအသေးစားတောင်းဆိုမှုတရားရုံးတွင် CA ရှိကုထုံး Sprout နှင့် WA ရှိအခြားတရားစွဲဆိုမှု၊ CA ရှိ Wilson အားအခြေမခံသောတားမြစ်ခြင်းနှင့် OR ၌သူ့ကိုအသရေဖျက်မှုတရားစွဲဆိုခြင်းတို့ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
ထို့အပြင်မိမိကိုယ်ကိုဝေဖန်မှုများကိုဖိနှိပ်ရန်၊ Prause သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်ပေါင်းများစွာကိုအခြေအမြစ်မရှိသောတရားစွဲဆိုမှုများဖြင့်ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည် - သူမကသူမမလိုက်ခဲ့ဘူးသူတို့ထဲက2ဆန့်ကျင်တရားစွဲဆိုမှုတင်သွင်းခဲ့သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သူမသည်သူမ၏လှုပ်ရှားမှုများနှင့်သိသာထင်ရှားသည့်ဘက်လိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ လူများ၏လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ကိုနှုတ်ပိတ်နေသည်။
၁) Tom Jackson@LivingThoreau) - နိုဝင်ဘာလ, 2019
Prause သည်အများပြည်သူအားဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ ၀ ယ်ရန်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးနောက်၎င်းကိုတင်ခဲ့သည်။ ဂျက်ဆင်သည်သူ၏တွစ်တာအကောင့်ကိုဖျက်ပစ်လိုက်သည်။ ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုတွင်ချီးမွမ်းခြင်းကိုမခံခဲ့ရပါ၊ သူ၏အယူအဆကိုထောက်ခံအားပေးခဲ့သောဂျက်ဆင်အားနှုတ်ဆိတ်သွားစေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ယင်းဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ခဲ့သည် သက်သေပြနိုင်သောသက်သေပြချက်အထောက်အထားများနှင့်အတူ ၏ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းပွဲများတက်ရောက်ခြင်း။ အသေးစိတ်များ - https://www.yourbrainonporn.com/relevant-research-and-articles-about-the-studies/critiques-of-questionable-debunking-propaganda-pieces/nicole-prauses-unethical-harassment-and-defamation-of-gary-wilson-others-3/#Jackson
၂) Mark Schuenemann (@Kurall_Creator) - နိုဝင်ဘာလ, 2019
တဖန်, Prause $ 10,000 တောင်းဆိုခဲ့သည်သို့မဟုတ်သူမတရားစွဲဆိုလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်မလုပ်ခဲ့ဘူး။ အသေးစိတ်: https://www.yourbrainonporn.com/relevant-research-and-articles-about-the-studies/critiques-of-questionable-debunking-propaganda-pieces/nicole-prauses-unethical-harassment-and-defamation-of-gary-wilson-others-3/#Mark
၃) ရဲရင့်သောဒန် (ယူကျု့ချန်နယ်) - နိုဝင်ဘာလ, 2019
အဆိုပါ Rhodes v ။ ဂုဏ်ပြုအသရေဖျက်မှုတရားစွဲဆိုမှုတင်သွင်းသည့်အချိန်လောက်မှာ YouTuber ရဲရင့်သောဒန် Rhodes ဝတ်စုံနှင့် Prause ၏မှတ်တမ်းတင်ထားသောရှည်လျားပြီးမှတ်တမ်းတင်ထားသောအသရေဖျက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်မှုအကြောင်းဆွေးနွေးသောဗီဒီယိုတိုတစ်ခုတင်ခဲ့သည်။ သူ၏ဗွီဒီယိုတွင်သူ၏ပုံရိပ်များပါ ၀ င်သည် ပထမ ဦး ဆုံး YBOP ချီးမွမ်းစာမျက်နှာ, မာတိကာဖေါ်ပြခြင်းနှင့်ကဏ္aအနည်းငယ်ကိုခေတ္တမီးမောင်းထိုးပြ။ ရဲစွမ်းသတ္တိရှိသောဒန်၏ဗွီဒီယိုသည်အမှန်အားဖြင့်တိကျမှန်ကန်ပြီးမည်သူမျှမရှုတ်ချပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, Prause က YouTube ကိုသတင်းပို့ခဲ့ပြီး Fearless Dan ကိုတရား ၀ င်အရေးယူမှုများပြုလုပ်ရန်ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ အသေးစိတ်: ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နို ၀ င်ဘာလ၊ “ လုံခြုံသောအိမ်အစီအစဉ်” ကိုအလွဲသုံးစားပြုခြင်းကိုကျူးလွန်ခြင်း။ သူမ YouTube ရုပ်သံလိုင်းအားဥပဒေကြောင်းအရအရေးယူခြင်းဖြင့်ခြိမ်းခြောက်နေပြီးဗီဒီယိုသည် YBOP ရှိသူမ၏အိမ်လိပ်စာနှင့်အသရေဖျက်မှုဖြစ်သည်ဟုမဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲခဲ့သည်။
၃) ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၁: @samosirmatthew မMatthewဲ
သူမက“ ဖောင်ဒေးရှင်းမှရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ရေးဝါဒဖြန့်ချိသူ” လို့ပြောခဲ့တာကိုတရားစွဲဆိုဖို့ Prause ခြိမ်းခြောက်ခဲ့တယ် အသေးစိတ်: https://www.yourbrainonporn.com/relevant-research-and-articles-about-the-studies/critiques-of-questionable-debunking-propaganda-pieces/nicole-prauses-unethical-harassment-and-defamation-of-gary-wilson-others-3/#Matthew
5) ဇန်နဝါရီလ, 2020: TranshumanAI
သူမကသူမနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်အချို့ကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးနောက်သူသည်တရားစွဲခံရခြင်းဖြစ်သည်ဟု Prause သို့အကြောင်းကြားခဲ့သည်။ သူကသူ့ရဲ့ tweet ကိုဖျက်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ Twitter account name ကိုပြောင်းလိုက်တယ်။ အသေးစိတ်: https://www.yourbrainonporn.com/relevant-research-and-articles-about-the-studies/critiques-of-questionable-debunking-propaganda-pieces/nicole-prauses-unethical-harassment-and-defamation-of-gary-wilson-others-3/#AI
၅။ ၂၀၂၀၊ မတ်လ - အမည်မသိ
ဤအမည် (အမည်မဖော်လိုသူမေးမြန်းခြင်း) ကိုခေါ်ခဲ့သည် သူမအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သောမှတ်တမ်းတင်ထားသည့်ဆက်ဆံမှုများကိုချီးမွမ်းပါ။ Pruse ဟာသူတို့ရဲ့အလုပ်ကိုလိုက်လုပ်ပြီး၊ ထိုသူသည်သူတို့၏အကောင့်ကိုလျှို့ဝှက်ထားခဲ့သည်။ အသေးစိတ်: https://www.yourbrainonporn.com/relevant-research-and-articles-about-the-studies/critiques-of-questionable-debunking-propaganda-pieces/nicole-prauses-unethical-harassment-and-defamation-of-gary-wilson-others-3/#anon
၇။ မေလ၊ ၂၀၂၀: DonorBox မှ Charles Zhang
DonorBox ကိုတည်ထောင်သူချားလ်စ် Zhang သည်၎င်းကိုတွစ်တာ (နှင့်မှတ်ချက်ပေးရန်) ဝံ့သည် ScramNews မှ Alexander Rhodes နှင့် NoFap သို့တောင်းပန်မှုနှင့်ငွေပေးချေမှု, Prause သည်ဒေါ်လာ ၁၀ K တောင်းခံပြီး Zhang ၏တွစ်တာများကိုမှားယွင်းစွာဖော်ပြခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ တရားစွဲဆိုမှုအား Zhang အားခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ အသေးစိတ်အတွက်ဤအပိုင်းကိုကြည့်ပါ။ မေလ ၂၀၂၀ တွင်နီကိုးလ်ပရာ့စ်သည် DonorBox ၏စီအီးအို (ချားလ်စ် Zhang) အားသူမ၏မုသားကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုအတွက်တရားစွဲဆိုမှုငယ်တစ်ခုအားခြိမ်းခြောက်နေပြီးနောက်ကွယ်မှနှောင့်ယှက်မှုများနှင့်မုန်းတီးမှုသတင်းပေးပို့ခြင်းများ (အားလုံး Rhodes ၏ရန်ပုံငွေများကိုဖြုတ်ချရန်ကြိုးပမ်းမှုတွင်)
၈။ နို ၀ င်ဘာ ၂၀၂၀- ဘီလ်တီဗစ် (YouTube ဝေဖန်သူ)
Tavis Prause ခဲ့ကြောင်းထောက်ပြသည် တစ် ဦး XRCO (porn စက်မှုလုပ်ငန်း) ဆုပြပွဲတက်ရောက်ခြင်းပုံ, နှင့် Prause သူ့ကိုအသရေဖျက်မှုနှင့်စွပ်စွဲ တစ် ဦး တရားစွဲဆိုမှုနှင့်အတူသူ့ကိုခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည် l ကိုပို့စ်တင်မှသူ့ကိုရပ်တန့်ရန်ကြိုးစားရန်မငြင်းနိုင်သောဓာတ်ပုံအထောက်အထားမှမှင်။ အမှန်တရားနှင့်အတူစိန်ခေါ်သောအခါ Prause သူမ၏မုသာအပေါ်နှစ်ဆ။ သူတို့ရဲ့နောက်ကျောနှင့်ထွက်၏ PDF ကို.
ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်၊ ၂၀၂၀
Prause သည် Deem အားသူမပြောသော (သို့) အသရေဖျက်မှုမရှိသောဖော်ပြချက်အမျိုးမျိုးအားစွပ်စွဲပြီးအဂတိလိုက်စားမှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုအား Deem အားခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။
10) ဒီဇင်ဘာလ, 2020: ဂယ်ရီ Wilson က
သူမသည်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းတင်းတင်းကြပ်ချုပ်နှောင်ထားသည့်အမိန့်တောင်းဆိုချက်ကိုတင်သွင်းပြီးနောက်တွင်သူမသည် CA ၌အရှုံးမခံရဘဲ၊ ၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာတွင် Prause က Wilson အားအသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲခဲ့သည်။ ဇန်နဝါရီလ 2020 ရက်နေ့တွင်ကြားနာမှုတစ်ခု အော်ရီဂွန်တရားရုံးက Prause သည်သူမ၏အမှုကိုမပြုလုပ်ခဲ့ပါ၊ Wilson ကတရားရုံးကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အနိုင်ရပါတီအဖြစ်အပိုထပ်ဆောင်းပြစ်ဒဏ်ခံစားခွင့်ရှိသည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်.
11) ဇန်နဝါရီလ, 2021: Staci အညွှန့်
မတော်လျော်သောနေရာအတွက် Prause ၏ CA အမှုအားတရားစွဲဆိုခြင်းအားပယ်ချပြီးနောက် WA မှ Sprout အားအမှုတင်ခဲ့သည်။ စောင့်နေပါတယ်